Sina Fotsy fotsy avo lithopone BA311 sy mpanamboatra | Soavaly tsiroaroa
1. Ny fampiasana lithopone:
1. Manana fanoherana hafanana tsara izy io, afaka manatsara ny fanoherana ny toetr'andro, misoroka ahidrano, mampihena ny vidiny ary manana fotsifotsy tena tsara miaraka amin'ny hery miafina faran'izay tsara.
2. Ny Lithopone dia manana fampiasana betsaka noho ny zinc sulfide. Mitovy amin'ny firafitry ny zinc sulfide, misy barium sulfate izy io ary somary ambany mateza. Fanoherana tsy mahomby. Ny vidiny dia mora, noho izany dia afaka manolo ampahany dioxide titanium izy io.
3. Ny Lithopone dia azo ampiasaina amin'ny fandokoana loko, ranomainty, fingotra sns.
Wvovoka kristaly manaikitra. Izy io dia mifangaro zinc sulfide sy barium sulfate. Arakaraka ny sulfida zinc no mampatanjaka ny hery miafina ary avo lenta ny kalitaony. Ny lithopone, fantatra koa amin'ny hoe lithopone, dia manana hakitroka 4,136 ～ 4,34 g / cm3 ary tsy mety ritra ao anaty rano. Ho simba mora foana izy io mba hamokarana entona sulfida hidrôzenina rehefa tratry ny asidra, fa tsy hiasa kosa rehefa tratry ny vahaolana hidrôzenina sy ny vahaolana alkaly. Manjary volondavenona maivana izy rehefa tratry ny taratra ultraviolet amin'ny masoandro mandritra ny 6 ka hatramin'ny 7 ora, ary mamerina ny lokony tany am-boalohany rehefa apetraka amin'ny toerana maizina. Mora ny manala rivotra amin'ny rivotra, ary mihombo sy miharatsy rehefa avy mando.
Isan'ny sulfida zinc & barium sulfide,% (m / m)
Raharaha miovaova amin'ny 105 degre,% (m / m)
Tsy voavaha rano,% (m / m)
Sisa amin'ny sivana (63μm volovolo),% (m / m)
Tombam-bidy solika,% (g / 100g)
Tint mampihena ny herinaratra (ampitahaina amin'ny santionany mahazatra),%
Hery manafina (tahan'ny fifanoherana)
Tsy latsaky ny 5% (santionany stansard)
Faritra fampiharana: be mpampiasa amin'ny firakotra, vovoka, plastika, piraofilina, hosodoko, loko tara-pirinty, rubber, taratasy ary hoditra.
Fonosana: kitapo plastika vita amin'ny taratasy 25kg sy kitapo 500kg sy 1000kg.
Fitaterana: Rehefa manondrana sy mampidina entana, azafady alefaso ary esory moramora mba hisorohana ny fandotoana sy ny fahasimban'ny fonosana. Ny vokatra dia tokony harovana amin'ny orana sy ny tara-masoandro mandritra ny fitaterana.
Mitahiry: Mitahiry amin'ny toerana misy rivotra sy maina amin'ny andiana. Ny haavon'ny vokatra dia tokony tsy mihoatra ny 20 sosona. Fady mafy ny mifanerasera amin'ireo entana taratry ny vokatra ary mifantoka amin'ny hamandoana.
Previous: Nanasa Kaolin
Manaraka: Fotsy fotsy ambony Lithopone BA312
Sina Lithopone Factory
Ny hatsaran'ny Lithopone